China QUARTZ STONE mpanamboatra sy mpamatsy | Montary
hateviny 18 mm / 20mm / 30mm
Drafitra teknika Manamboatra tampon-vato amin'ny quartz izahay, manapaka ny masinina ary avy eo nohosoran'ny mpiasa mahay sy za-draharaha.
Fanandramana: Nandritra ny taona maro niainany tamin'ny famolavolana, Montary dia matihanina ary mahay manamboatra vato namboarina sy vato voajanahary. Ny ankamaroan'ny mpiasanay dia manana traikefa 6 taona amin'ny famoronana, miasa sy mitombo ao Montary izy ireo, ary vonona ny hanokana ny fahendreny sy ny traikefany amin'ny mpanjifa tsirairay amin'ny alàlan'ny fanaovana countertop tonga lafatra. Kalitao: tsapan'i Montary lalina fa ny kalitao no fototry ny fampandrosoana maharitra. Noho izany dia manizingizina izahay ny fanaraha-maso in-4, tsikelikely, hamarino fa ahena farafahakeliny ny lesoka. Fotoana: Amin'ny fandefasana ara-potoana, andro fiasana 20 ho an'ny kaontenera 20ft iray. Serivisy: Fantatray izay tianao ary fantatray ny fomba hanompoanao tsara. - Manana varotra 30 izahay manao ny serivisy VIP amin'ny fomba matihanina - Vokatry ny vokatra an'arivony, loko, fomba, mety amin'ny mpanjifa mividy indray mandoa - Azo haingoina arakaraka ny fitakian'ny mpanjifa ny vokatra isan-karazany - Sampan-draharaha misahana ny lojika manokana, matihanina fandefasana entana, afaka manome ny fitaterana tsara indrindra izahayF
Fivoahan'ny famokarana ho an'ny mpanohitra ambony:
Dingana 1 Fanapahana (milina fanapahana infrared Bridge)
Dingana 2 Hetezo (milina fanapahana rano)
Dingana 3 Fanapahana 45 degre (45 degre fanapahana milina)
Dingana 4 Poloney (Poloney manara-penitra)
Dingana 5 Chamfer (Manual Beveling)
Dingana 6 Madio sy manara-maso (Fanamarinana amin'ny tanana)
Dingana 7 Fonosana (amin'ny crated hazo)
1. Inona no ataon'i Montary? Montary dia mpanamboatra matihanina sy za-draharaha ary mpamorona takelaka vato voajanahary / voajanahary ary tampon-trano efa vita mialoha, miaraka amin'ny fanondranana mihoatra ny 10 taona amin'ny tsena manerantany. 2. Nahoana ny mpanjifa no tokony hisafidy an'i Montary?
Hevitra matanjaka Montary:
1) Fanangonana maro loko.
2) Mifikitra hatrany amin'ny fironana iraisam-pirenena.
3) Mifantoha bebe kokoa amin'ireo fanangonana miorina amin'ny fotsy sy fotsy ary fanangonana marbling / veined.
4) Kalitao sy serivisy manara-penitra iraisam-pirenena, amin'ny vidiny sinoa mora vidy.
5) 7 + 24 fifandraisana mora sy valiny haingana.
6) Ny takelaka vato roa sy ny tampon'ny prefabricated dia misy avy any Montary.
3. Iza ny firenena no tsena lehibe any Montary? Ny takelaka vato Montary sy ny tampon'ny prefabricated dia alefa any Etazonia, Aostralia, Kanada, UK, Italia, Mexico, Dubai, Torkia, Brezila, Afrika Atsimo, HongKong, Korea, Vietnam, Thailand, Malaysia, sns.
4. Efa nandray anjara tamin'ny fampirantiana ve i Montary? Isan-taona i Montary dia mandray anjara amin'ny fampirantiana any Etazonia, Eropa, Dubai, Brezila, Azia, sns.
5. Moa ve i Montary manana ny fahaizany manao ny tampon-trano vita mialoha vita amin'ny vato ho an'ny tetikasa? Eny, i Montary dia manana atrikasa fanamboarana miaraka amina karazana fotodrafitrasa mandeha ho azy ho an'ny countertop vita mialoha ho an'ny tetikasa avo lenta.
6. Inona ny fampahalalana tokony omen'ny mpanjifa an'i Montary amin'ny fanaovana topa prefabricated? Ny mpanjifa dia tokony manome sary fivarotana na sary soratana an-tanana miaraka amin'ny antsipiriany momba ny refy sy ny mombamomba azy ary ny habeny marina.
7. Inona avy ireo mombamomba anao avy any Montary? Montary dia afaka manao karazana mombamomba azy rehetra, toy ny Eased Polished, Half Bullnose, Full Bullnose, Bevel Edge, Radius Edge, Flat Laminated, Bevel Laminated, Radius Laminated, sns.
8 Ahoana no amboaran'i Montary ny tampon'ny vato efa voaorina? Montary fonosana ny tampon-trano efa vita prefabricated amin'ny vatan-kazo mafy sy foam ao anatin'ny vata mba hiarovana.
9. Azo atao ve ny manara-maso ny cargos ao amin'ny orinasa Montary alohan'ny hametrahana azy? Eny, raisinay an-tsitrapo ny mpanjifa rehetra hijery ny kargôo alohan'ny hametrahana azy.
10. Azo atao ve ny manao ny OEM miaraka amin'i Montary? Eny, Montary dia manome ny serivisy OEM amin'ny fanontana ny Logo an'ny mpanjifa na ny anaran'ny orinasa.
Previous: VATO VATO NANO
Manaraka: MARCLE ARTIFICIAL
Vato Quartz artifisialy
Vato Quartz Calcutta
Top Counter Stone Counter Top
Countertops vato quartz
Vato vato quartz
Vato Quartz fotsy